Isitya siza kuthiwa siyolahla abathengi abanengeniso ephantsi ezizigidi ezi-2.5 emva kokuthenga ukonyusa iselfowuni
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isitya siza kunika ingxelo yezigidi ezi-2,5 zabathengi abarhola imali encinci emva kokuthenga iBoost Mobile
Isitya siza kunika ingxelo yezigidi ezi-2,5 zabathengi abarhola imali encinci emva kokuthenga iBoost Mobile
Xa ukudityaniswa kweT-Mobile-Sprint kwabhengezwa okokuqala nge-Epreli 29, 2018, kwabonakala ngathi ukufumana iSebe lezoBulungisa lase-US ukuba livume ukuthengiselana kwakuza kuba ngumcimbi omkhulu. Emva kwayo yonke loo nto, inani lezinto eziphambili ze-US zaziza kuncitshiswa ngama-25% kwaye emehlweni e-DOJ, oko kuthetha ukhuphiswano oluncinci kunye namaxabiso aphezulu. Nangona kunjalo, isicwangciso sobuchule senziwa ngobuchule esiya kuguqula iDish Network ibe 'yindawo yesine yelizwe lonke esekwe kukhuphiswano lwenethiwekhi,' ithathe indawo yeSprint.
Nje ukuba i-T-Mobile ivale ukuthengiselana kwayo ne-Sprint, isivumelwano sesibini siya kubona iDish Network ithenga zonke i-Sprint & apos; amashishini ahlawulelwa kwangaphambili (kubandakanya i-Boost Mobile kunye neVirgin Mobile) ye- $ 5 yezigidigidi. Isivumelwano sibandakanya i-14MHz ye-Sprint & apos; s 800MHz spectrum, abasebenzi abangama-400, iivenkile ezingama-7,500 kunye nabathengi abazizigidi ezingama-9.3 kumazwe angama-50. Isitya siza kutyikitya ikhontrakthi yeminyaka esixhenxe ye-MVNO kunye ne-T-Mobile ukuze iqale ukuthengisa inkonzo engenazingcingo ngelixa isakha inethiwekhi yayo ezimeleyo ye-5G.
Umsunguli weBoost Mobile uthi iDish iya kwenza inkonzo ehlawulelwa kwangaphambili ngenjongo yokufumana abathengi abangenanzuzo ukuba bahambe
Kodwa ukuba umsunguli weBoost Mobile, uPeter Adderton, uchanekile, iDish iyakuphela ijonge ukunciphisa iindleko ngokwenza amatyala kangangezigidi ezi-2.5 zabathengi abahlawulwe kwangaphambili. Ngokweendaba zeFox Business News , aba banokuba ngabathengi ngaphandle kwamacingo iDish engakholelwa ukuba ingenza imali ngayo. I-Adderton yasungula i-Boost ngo-2000 yaza yayithengisa kwi-Nextel ngo-2003. Kwiminyaka emibini kamva, iSprint yaxhoma i-Nextel ichola i-Boost Mobile kule nkqubo. U-Adderton ukholelwa ukuba ukuba isitya sigqibile ukuthengiselana nge-Sprint, kuyakufuneka sinciphise iindleko ukuze sikwazi ukuhlawulela ukwakhiwa kwenethiwekhi ye-5G. Utsho ukuba isitya sizakushukumisa isantya sedatha yabathengi abathile abahlawulwa kwangaphambili ngethemba lokuba baya kuthatha isigqibo sokuthatha ishishini labo baye kwenye indawo.
Ekuphela kwento ebambe ukudityaniswa kweT-Mobile-Sprint lityala eligwetywe ngamagqwetha kawonkewonke ali-15 kunye negqwetha jikelele laseWashington DC elifuna ukuthintela ukudibana. Isitya, esinexhala lokuba izimvo zika-Adderton zingenza ukuba kubonakale ngathi inkampani izakubashiya abathengi abanengeniso ephantsi ngaphandle kwengqele, baphendule ngokukhawuleza kwizimvo zakhe. 'I-DISH iceba ukukhulisa ngokurhabaxa ishishini lokonyusa ukusukela ngosuku lokuqala,' utshilo umkhulumeli wenkampani. 'Emva kokuvala, sinomdla wokubonelela abathengi abakhoyo nabasaza kubakho ngeenkonzo zethu zokuphumelela abathengi. Nakuphi na ukuqikelela okuchaseneyo nobuxoki kwaye kubonakalisa ezinye i-ajenda. ' U-Adderton uphendule watsho esithi Boost abathengi bafanelwe ngaphezulu kwesandi sokubetha. Indoda eqale iBoost ichaze ukuba izivumelwano ezenziwe yi-T-Mobile kunye ne-Sprint ukulungiselela ukufumana i-FCC kunye ne-DOJ ukuvunywa kokudibana kwabo don & apos; kuthintela iDish ekubeni ilahle umgangatho weenkonzo ezihlawulelwa kwangaphambili eziya kuzithenga kwiSprint ukufumana abathengi abangenanzuzo. ukulahla inkonzo. NgokukaDish & apos; ukukhutshwa kwakhe ngoJulayi ophelileyo, umboneleli womxholo wesatellite kufuneka agubungele iipesenti ezingama-70 zase-US ngemiqondiso yayo ye-5G ngoJuni 14, 2023. Ukuba loo njongo ayifezekiswanga ngexesha, iDish kuya kufuneka yenze igalelo ngokuzithandela. kuNondyebo wase-US kwisixa esiyi- $ 2.2 yezigidigidi.
Umsunguli we-Boost Mobile ulindele ukuba isitya siza kulahla i-2.5 yezigidi zabathengi abahlawula umvuzo ophantsi xa sele befumene ukunyusa kunye nezinye izinto ze-Sprint
Ityala elibambe ukudityaniswa kweT-Mobile-Sprint liza kuya kulingo ukuqala ngoDisemba 9. Abamangali banenkxalabo yokuba iT-Mobile-Sprint edityanisiweyo iya kuphakamisa amaxabiso kwaye ithintele abantu baseMelika abarhola imali encinci ekufikeleleni kwi-intanethi. I-T-Mobile iye yajongana nale micimbi ngale ntsasa xa ibhengeza ukuba izokwazisa kwilizwe lonke le-5G eMelika ngoDisemba 6. Ikwabhengeze isicwangciso esinexabiso eliphantsi esibizwa ngokuba yi-T-Mobile Connect enika intetho engenamda, isicatshulwa kunye ne-2GB yedatha ye- $ 15 ngenyanga. Esi sicwangciso siza kuhlala sinamaxabiso kwelo nqanaba iminyaka emihlanu ngentloko yenyanga inyuka nge-500MB minyaka le. Ke emva konyaka wokuqala, ababhalisile bazakufumana i-2.5GB yedatha inyanga nenyanga kunyaka olandelayo, i-3GB ngenyanga ngenyanga elandelayo kunye nokunye.
indlela yokufikelela kwi-sim khadi ye-iphone
Ezona zixhobo zilungileyo ze-rpg ze-iphone
Ityala elifanelekileyo leSamsung Galaxy Note 10 kunye neNqaku 10+: khusela i-jewel yakho entsha ekhazimlayo!
Elona xabiso liphezulu le-cyber yangoMvulo 2020: eyona minikelo iphambili isekhona
Okokuqala ukutshintshela kwi-Android uye kwi-iPhone njengomqhubi wemihla ngemihla, nantsi into endiyithandayo kunye nento endingakhange ndiyithande